Iforamu eqikelelweyo yeDemokrasi (i-FvD) yokuxoxa: UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	19 Agasti 2019	• 2 Comments
Ndabhala kwi-13 ngoJuni nqaku ngesihloko esithi 'Ukudilizwa okwonakalisiweyo kwegama 'rechts', uTrump, iBrexit (nayo yonke into enxulumene nayo) sele iqalileMsgstr ". Ngapha koko, akukho okuninzi okutshintshileyo. Ukudilizwa okubekiweyo 'kwelungelo lokwakha uphawu lokwenene' kuguqukele ngokupheleleyo ngokurhoxiswa kweenkundla ezininzi ngokudibeneyo noHenk Otten. Uhlobo olusekunene lwamele lubonakaliswe ngumnatha wokhuseleko oqeqeshiweyo: ukusuka kuDonald Trump e-US, u-Marine le Pen wase-France uye ku-Thierry Baudet eNetherlands. Olo hlobo lwalusenzelwa ukuba kuqinisekiswe ukuba iingcinga ezinzulu kusetyenziswa amajelo eendaba ziye zangqinwa kukucingelwa iyelenqe nakwinto eyenziwayo ngabantu abanamaphiko kuphela. Ke uphawu kwafuneka lufuduselwe kwelona gunya likhulu nakwilizwe lesizwe kwaye kude kuthande nobuhle kubasetyhini.
IBrexit yase-UK nayo ilungile kwaye yeyobuzwe ngombala, kwaye inkokeli uBoris Johnson ungumlinganiswa onjalo oxelwayo onokubekwa kwikona efanayo. Le ndlela yephiko lasekunene yayisele iqala ukufumana ubuso kunye ne-Nigel Farage yase-UKIP, kodwa ukuphuma-kokusilela okucwangcisiweyo kweBrexit kunokunxitywa abanye abadlali. Ewe, ngenxa yokuba sekulixesha lokuba umfundi ayibone into yokuba abezopolitiko ngokwenene abayonto ngaphandle kwabadlali abaqeqeshelwe amandla, abo bonke badlala indima yokuxhasa ukubonakala kwentando yesininzi. Idemokhrasi ayisekho; yinto emde eyenza ukuba abantu abakholelwa ukuba banelizwi. Imidiya ivumela abadlali ukuba badlale umdlalo wabo phambi kwekhamera kwaye badlale indima ekhokelayo ekugcineni konke oko kubambekayo kuthembekile. UTheresa May kwafuneka enze iBrexit ibe ngumqobo omde kwaye ongenakufikeleleka, kwaye uBoris Johnson ngoku angadlala i-hardliner enokuthi ekugqibeleni yenze izinto zisebenze. Akunyanzelekanga ukuba konke kube nzima, kodwa kwenziwa nzima ukubonisa umhlaba uphela ukuba ukulwa nokudodobala, ubuzwe kunye nophawu (ibala) ziphumela ngasekunene. Oku kuya kubiza imali kwaye kukhokelele kwintlekele yoqoqosho (ukuyila ngabom kunye nokuzenzela).
Ndisenzile esi sibhengezo apha kumanqaku amaninzi kangangokuba iphantse yabanjwa njengehlazo ukuba abantu basabukele iinkqubo zokuxoxa zikamabonwakude okanye balandela iindaba ukuba bazithathe ngokungathí sina. Sukwenza ngaphezulu! Uya kubanjwa ngokusisigxina kwinyani yamanga ngama-pawns anamandla athatywayo onke adlala umdlalo ngokutshintshana ngobomi obutofotofo.
Sisemva kokusilela kweBrexit, ngebhonasi eyongeziweyo ukuba iponti yaseBritane ifikelele kwinqanaba elifanayo ne-euro. Esi sisiphumo esihle. Ngapha koko, umahluko wamandla oqoqosho alinganayo ngokubonakala kwenkqubo yeBrexit. Iziphumo ezifanayo zoqoqosho njengaxa iMpuma Jamani yayitsalwa kwiNtshona yeJamani. Kubuhlungu okomzuzwana, kodwa uloliwe ophakathi uyaqhuba. IBrexit enzima kufuneka ikhokelele kwixesha lentlekele kwezoqoqosho, ngeyona njongo iphambili yokufezekisa amandla athile eBrussels. "U-Ordo ab Chao"; iqhinga lakudala laseRoma. E-US, intlekele yezoqoqosho ngenxa yemfazwe yorhwebo kaTrump kunye nezinye izinto ezingalunganga zihleli. Ukuba nawo lo ngumdlalo olawulwayo ukuze ukwazi ukujongana nobuzwe, uphawu "oluchanekileyo" kunye nesandi ngasinye esibucayi ngokubhekisele kudibaniso lwehlabathi, ndicacisile kumanqaku aliqela.
Nabani na olandela ibali le-Q-Anon kunye ne-sham enzulu (iClinton's kunye nokunye), uwela ibali elinokuthi laphazanyiswa kwinzonzobila yezulu, kuba leyo isebenza kwinqanaba lehlabathi. Sithetha emva koko igazi pharaonic legazi abalawula umda wentando yesininzi (okanye ubushiqela) kwihlabathi liphela. Iskripthi esikhulu senkosi sibonisa ukuba urhulumente wehlabathi lonke unolawulo olupheleleyo kuwo onke amakhoboka, alawulwa nge-intanethi. Funda yonke into malunga neskripthi esikhulu eli nqaku kwaye ufunde amanqaku asuka kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ukuze uqiniseke ukuba ekugqibeleni uyakuqonda ukuba udlalwa kweliphi inqanaba. Kucetyiswa ukuba usoloko ucofe kwikhonkco eliluhlaza kumanqaku am ukuze ungqinisise oko ukufundayo. Lixesha lokuba uvuke ngokwenene kwinqanaba elinzulu kakhulu kunangoku.
tags: Brexit, ukuxolisa, wentando, eziziimbalasane, Forum, FvD, lawulwa, Henk Otten, nenkcaso, kunene, kuba
20 Agasti 2019 kwi-11: 15
Sibiza abalingisi abaphambili, emva koko
20 Agasti 2019 kwi-17: 41
akukho lizwi lokudibanisa, umculo.
« Iyingozi kangakanani i-5G kwaye ifakwe ngasese njani
Ngaba kuya kubakho iintloko kwiqonga likaJeffrey Epstein? »
Iindwendwe ezipheleleyo: 12.348.796
Yintoni eyinyani ngokubulawa kukaDerk Wiresma kwaye kuthetha ntoni oko 'ngqina lesithsaba'?
Ngaba kuya kubakho umlo phakathi kwe-US ne-Iran kungekudala?
Owayesakuba yiDisney Channel asterisk utsho ukuba uphethwe gadalala yi-Hollywood pedophiles
Umnxeba ongxamisekileyo! Kufuneka sibeke imithombo yeendaba ngaphandle kokusebenza ngoku!
UMartin Vrijland op Yintoni eyinyani ngokubulawa kukaDerk Wiresma kwaye kuthetha ntoni oko 'ngqina lesithsaba'?
Riffian op Ngaba kuya kubakho umlo phakathi kwe-US ne-Iran kungekudala?
SandinG op Yintoni eyinyani ngokubulawa kukaDerk Wiresma kwaye kuthetha ntoni oko 'ngqina lesithsaba'?
Patricia van Oosten op Yintoni eyinyani ngokubulawa kukaDerk Wiresma kwaye kuthetha ntoni oko 'ngqina lesithsaba'?
Joyina amanye ama-1.635 ababhalisile